ရထားလမ်း RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
လမ်းရထားသတင်းများ၊ လမ်းပေါ်စီမံကိန်းများ၊ လမ်းရထားမြေပုံများနှင့်လမ်းကြောင်းများ၊
mirzmir ရှိရထားဖြင့်သယ်ယူသောခရီးသည်အရေအတွက်သည် 50 သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည် Karşıyaka ve Konak tramvaylarında günlük yolcu sayısı 120 bini buldu. İzmir’de raylı toplu taşımanın önemli ayaklarından biri olan tramvayla taşınan yolcu sayısı [ပို ... ]
AkçarayကိုKuruçeşmeနှင့်Şehirဆေးရုံအထိတိုးချဲ့မည်။ သဲသောင်ပြင်လမ်းမကြီးအထိတိုးချဲ့ထားသောလမ်းရထားလိုင်းကိုတနင်္လာနေ့တွင်စတင်အသုံးပြုမည် 2,2 ကီလိုမီတာကီလိုမီတာသစ်ကိုအလုပ်ပြီးစီးပြီးသော Kocaeli မြို့တော်ဝန် Assoc သည်ပထမဆုံးစီးပါလိမ့်မည်။ ဒေါက်တာ Tahir [ပို ... ]
Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်, ကျောင်းသားများ '10 နံပါတ်လိုင်း' အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်အကြား 10'un ခရီးစဉ်လိုင်းအဖြစ်လူသိများသည်မပြတ်မတောက်ဆက်လက်။ တစ်လှည့်လည်ခရီးစဉ်နှင့်အတူ 59 [ပို ... ]
ဗန်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မော်ဒယ်သစ်ကိုစောင့်နေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထရမ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်လေးနက်သောပြည်သူ့အမြင်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည် [ပို ... ]
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan Konya Kitap Günleri kapılarını açtı. 10 gün süreyle açık kalacak Konya Kitap Günleri bu yıl Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. [ပို ... ]
1 သြဂုတ် 2017 နေ့မှစ၍ Kocaeli Metropolitan Municipality မှနိုင်ငံသားများအားကမ်းလှမ်းသောAkçarayလမ်းရထားသည်တစ်ပတ်လျှင်ခရီးသည်တစ်သောင်းအား 1 သယ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်စံချိန်တင်ထားသည်။ နိုင်ငံသားတွေကြိုက်နှစ်သက်ပြီးကြိုက်နှစ်သက်သောလမ်းရထား၊ [ပို ... ]